किन बढिरहेको छ विदेश पढ्न जानेको संख्या ?
फरकधार / असोज ९, २०७५
काठमाडौं– केही वर्ष यतादेखि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाामा दिनको ३ सयको हाराहरीमा पढ्न जानका लागि विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षका बीचमा वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या विगत सात वर्षदेखि निरन्तर तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको तथ्यांक हेर्दा ५० हजार ६ सय ५९ विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यो संख्या बढेर ५८ हजार ७ सय ५८ जना पुगेको छ । अहिलेसम्मको विवरणलाई हेर्दा पढ्न जानेहरूका लागि यो विवरण नै अधिक रहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३२ हजार ४ सय ८९ जनाले अध्ययनका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका थिए भने २०७१÷०७२ मा यो संख्या ३० हजार ६ सय ९६ रहेको थियो ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २८ हजार १ सय २६, आव २०६९/०७० मा १६ हजार ५ सय ४, आव २०६८/०६९ मा १० हजार ३ सय २४ ले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए ।
तर, आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को तथ्यांक हेर्दा ११ हजार ९ सय ८२ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका थिए । तर, यो संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको अनुपातमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ ।
यसरी देशका बौद्धिक वर्ग अध्ययन गर्ने बहानामा विदेश जाने तर नफर्कने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केही हदसम्म असर परेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय प्लस टु सक्नेबित्तिकै उच्च अध्ययनका लागि विदेश जाने फेसनजस्तै बनेको छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रमा नेपालको शिक्षामा ठूलो लगानी भए पनि विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययनमोहमा भने कमी आउन सकेको छैन । वैदेशिक अध्ययनका लागि जानेहरूले विषयअनुसार र बसोवाससहित कम्तीमा पनि १५ देखि २० लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय उच्च वर्गमा मात्र नभई मध्यमवर्गीय परिवारमा पनि विदेश पढ्न जाने लहर बढेको छ । विदेश पढ्न जाने लहर बढेसँगै नेपालबाट ठूलो रकम पनि बाहिरिइरहेको छ ।
नेपाली शिक्षा प्रणालीले अहिले न अभिभावकको विश्वास जितेको छ न त विद्यार्थीको नै । भर्खर पढ्दै गरेका युवायुवतीमा यस्तो छाप परेसँगै देशमा भएका बौद्धिक जनशक्ति पनि बाहिएको छ ।
विदेश पढ्न जाने उमेरमा १७ देखि २५ वर्षसम्मका युवायुवती बढी रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । साउनदेखि भदौ २ गतेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्न हो भने ११ हजार ८ सय ९७ जना विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश पढ्न जाने अनुमति लिइसकेका छन् ।
त्यसमध्ये आधाभन्दा बढीको रोजाइ अस्ट्रेलिया बन्न पुगेको छ । गत साउन महिनादेखि भदौ २ सम्मको विवरण हेर्दा ५ हजार ६ सय २० जनाले अनुमति लिइसकेका छन् । त्यसैगरी, दोस्रो नम्बरमा जापान परेको छ । जहाँ २ हजार ३ सय ६० विद्यार्थीले अनुमति लिइसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार ७२ वटा देशका लागि अनुमति दिइएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कक्षा १२ पढाइपछि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको छ ।
अस्ट्रेलिया र जापानमा लहर
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तंथ्याकलाई हेर्दा नेपाली विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा अस्टे«लिया देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार पहिलो रोजाइमा जापान थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३२ हजार २ सय १२ जना विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया जानका लागि मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् । त्यसैगरी, जापानका लागि १० हजार ३ सय ६६ जनाले अनुमति लिएका छन् ।
११ करोड राजस्व सकंलन
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट नेपाल सरकारले एक वर्षमा ११ करोडभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ । ५८ हजार ७ सय ५८ जना विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी २ हजार उठाउँदा गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड ७५ लाख १६ हजार राजस्व उठेको छ ।
एक जना मात्र विद्यार्थी गएका ६ देश
गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विवरण हेर्दा ६ देशमा अध्ययन गर्नका लागि एक–एकजना विद्याथीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगेका छन् । ती देशहरूमा रोमानिया, भियतनाम, आइसल्यान्ड, माल्दिभ्स, बहराइन, स्कटल्यान्ड हुन् ।
किन बढ्दै छन् विदेश जाने विद्यार्थी ?
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार दैनिकजसो तीन सयको हराहारीमा नो अब्जेक्सन लेटर अनुमति लिन आउने विद्यार्थीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
उपसचिव पौडेलका अनुसार नेपालका विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने क्रम बढ्नु कारणबारे शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै अध्ययन भएको छैन । विद्यार्थीमा विदेश अध्ययनमा जानुको मुख्यत यी कारण हुन सक्छन्–
१. विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा बिक्ने अपेक्षा ।
२. विदेशमा गएर पढ्दै, कमाउँदै केही खर्च बचाउने मानसिकता ।
३. नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर हँुदै जानु ।
विद्यार्थीमा पढ्ने भन्दा कमाउने लोभ
अहिलेसम्म विदेश गएका अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न भनेर गएका छैनन् । नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाको तथ्यांकअनुसार उच्च अध्ययन गर्न भनेर विदेश गएका विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशत मात्र साँच्चिकै पढ्न जाने गरेका छन् ।
विकसित देशहरूमा अध्ययन गरिरहेका विद्याथीले साताको केही निश्चित समय मात्र काम गर्न पाउँछन् । बिदाको समयमा पूरा काम गर्न पाउँछन् । यसले गर्दा पनि विद्यार्थीले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छन् । मुख्य रोजाइको देश अस्ट्रेलियालाई हेर्ने हो भने अस्ट्रेलियामा तीन वर्ष स्नातक र दुई वर्ष स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि राम्रो काम पाइन्छ । जुन समयमा विद्यार्थीले राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छन् ।
अस्ट्रेलियामा अध्ययनपछि दुई वर्षसम्म पोस्ट स्टडी वर्क गनुपर्ने र पिआरसमेत सहज व्यवस्था हुने भएकाले विद्यार्थीको रोजाइ बढ्दै गएको शैक्षिक परामर्श दातृ व्यवसायी संस्थाले बताउँदै आएका छन् ।
नेपाली विद्यार्थीमा नयाँ गतव्यमा परेका देशहरू
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मन्त्रालयको विवरणअनुसार युनाइटेड अबर इमिरेट्स, हंगेरी, थाइल्यान्ड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, मलेसिया, फिनल्यान्ड, रसिया, स्पेन, नर्वे, मौरिसस, बहराइनजस्ता देशमा सयौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएका छन् ।
इस्टोनिया, लात्भिया, जर्जिया, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, इटाली, ओमन, अयरल्यान्ड, स्लोभानिया, कतार, पाकिस्तान, साउथ अफ्रिका, बेल्जियम, किर्गिस्तान, बेल्जियम, स्विटजरल्यान्ड, सिंगापुर, टर्की, साउदी अरेबिया, लिथेयोनिया, इजिप्टजस्ता देशमा पनि नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि पुगेका छन् ।
त्यसैगरी, उत्तरको रिया, अस्ट्रिया, पोर्चुगल, अर्मानिया, श्रीलंका, बेलारुस, ग्रिस, इजरायल, क्रोएसिया, इन्डोनेसिया, बोस्निया हर्जगोभिना, ताइवान, माल्भिसजस्ता मुलुकमा पनि नेपाली विद्यार्थी पुगिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसकारण बढ्दै छ विदेश जाने लहर
विदेश गएका ३० प्रतिशतले मात्र अध्ययन गर्छन्
प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला, शिक्षविद्
शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर विदेश गएका विद्यार्थी पढ्न गएका हो कि होइन भन्ने प्रश्नलाई अध्ययन गनुपर्छ । अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार पढ्न भनेर गएका विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशतले मात्र अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सामान्यतया नेपाली विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेशमा सामुदायिक कलेज नै रोज्ने गरेका छन् । ती कलेजमा कुनै विषयमा भर्ना गरेपछि वर्षौं लगाएर पनि पढ्न पाइने गरेको छ । त्यसमा पनि अहिले नेपालबाट गएका विद्यार्थीको मनसाय पैसा कमाउने देखिन्छ ।
नेपालमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने आशा राजानीतिक नेतृत्वले जगाउन नसकेकाले पनि विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य भएका हुन् । त्यसैगरी, अहिलेका केटाकेटीमा अभिभावकसँग टाढा हुने मनोवृत्ति बढेको छ ।
अहिलेका विद्यार्थीको पढ्ने चाहना धेरै विविधता भएर गएको छ । त्यसमा पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली असाध्यै पुरानो छ । त्यसैले पुरानो ढंगमा चलेका कलेज र नयाँ ढंगको चाहनाले पनि बाहिरिने विद्यार्थीको जमात बढ्दै छ ।
देशबाट विलय हुने मनोवृत्ति बढेको छ
प्रा. केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद्
पढाइको नाममा पैसा कमाउन जाने विद्यार्थी बढी रहेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो चरणमा विद्यार्थीमा पढाइका लागि भन्दा पनि जागिर, काम, देशबाट विलय हुने खालको मनोवृत्ति बढेको छ । उनीहरू विदेशमा पढ्न जाने मात्र उद्देश्य बोकेर गएका छैनन् ।
अहिलेका विद्यार्थीमा नेपालमा केही सम्भावना नदेखेको र विदेश गएपछि केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने धारणा छ । त्यसमा पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली खस्किँदै गएको छाप परेका कारण विदेश नै रोज्ने बाह्य भएका छन् ।
विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनमा जानबाट रोक्न लागि सार्वजनिक कलेज र विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप पनि बन्द हुनुपर्दछ ।